The Institute for the Study and Treatment of Pain - IGBO Gịnị bụ IMS? GunnIMS: Intramuscular mmalite
IGBO Gịnị bụ IMS? GunnIMS: Intramuscular mmalite
Gịnị bụ IMS? GunnIMS: Intramuscular mmalite
IGBO / sụgharịa LANGUAGE
Nke a page e ngwa ngwa sụgharịa eji Google Translate, a na kọmputa site na mgbalị na-asụgharị mkpa nlekọta ahụ ike na ozi maka ọha na eze. Jiri dobe ala igbe na n'elu aka nri nke ọ bụla webpage ịsụgharị ọmụma gị họọrọ asụsụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị na-arịọ enyemaka. Biko ịgbaghara ọ bụla mperi ndenye ihe wetara, ezigbo mmadụ afọ ofufo ndị nsụgharị na-ukwuu ekele ; )
Gịnị bụ Gunn IMS? Gunn Intramuscular mmalite
Supersensitivity na muscle shortening ike-ejikwara na na 'bee efep,' mgbe 'ahụ mgbu' na ndị ọzọ na ịnụ ọgwụ ọgwụ naanị ikpuchi ihe mgbu (mgbe agụghị oké) na-akwalite toxicity, njọ nsogbu. Neuropathy naanị emegharị a anụ ahụ ọsọ ọsọ nke ike.
Intramuscular mmalite (IMS) bụ ngụkọta usoro maka nchoputa na ọgwụgwọ nke myofascial mgbu ọrịamkpokọta (adịghị ala ala mgbu ọnọdụ ndị na-eme na nweekwa usoro mgbe ọ dịghị ihe doro anya ihe ịrịba ama nke mmerụ ahụ ma ọ mbufụt). IMS na-ebe ke Western Medical Science, na nwere a ntọala siri ike na ya radiculopathic nlereanya nke ihe mgbu, nke ugbu a na-akwado site na ọtụtụ ndị ọkachamara na ubi. Ọ e mepụtara site Dr. Gunn mgbe ọ bụ dibịa na ọrụ si Akwụ ụgwọ Board of British Columbia ke 70, ebe ọ nyochaworo nnukwu ọtụtụ mysteriously isi ike mgbe mgbe obi nkoropụ na adighi ike ụgbọelu na-atọgbọ. The ọgwụgwọ, nke utilizes igba okpukpu agịga n'ihi na ha bụ ndị thinnest achụ nta dị na-iji banye n'ime muscle anụ ahụ, kpọmkwem zaa merụrụ ahụ uru na butere ma na-shortened site na nsogbu.
IMS adabere kpamkpam na a ọma ahụ nyochaa onye ọrịa site a eru eme, zụrụ ịmata ahụ ihe ịrịba ama nke neuropathic mgbu. Anụ ahụ a nnyocha dị oké mkpa kemgbe ala ala mgbu bụ mgbe akwara ozi dị ka megide bughi, ya mere, na-apụghị ịhụ oké ọnụ X-ụzarị, MRI Ule, Ọkpụkpụ na CT-enyocha kwa. Odida ịmata ihe ịrịba ama ga-eme na ihe etịbe nchoputa, na otú a, a ogbenye amalite ọgwụgwọ anụ ahụ.
The ọgwụgwọ na-agụnye akọrọ needling nke metụtara ebe ahụ enweghị ịgbanye ọ bụla umi. The agịga saịtị nwere ike ịbụ na ebe oria a kachaa nke taut, obi muscle ìgwè, ma ọ bụ ha nwere ike ịbụ nso ọkpụkpụ azụ ebe akwara mgbọrọgwụ nwere ike na-enwe mgbakasị na supersensitive. Penetration nke a nkịtị muscle bụ enweghi mgbu; Otú ọ dị, a shortened, supersensitive muscle 'ga-ighota' agịga na ihe nwere ike kọwara dị ka a cramping sensashion. N'ihi bụ atọ. One, a gbatia ihe nnabata na muscle a kpaliri, na-amị a mpiaji ntụrụndụ (ogologo oge). Two, agịga na-akpata a obere mmerụ na-adọta ọbara ebe ahụ, wetere eke na-agwọ ọrịa usoro. Atọ, na ọgwụgwọ na-emepụta ihe ọkụ nwere na muscle ime ka akwara ọrụ ejikari ọzọ. The agịga eji na IMS, site na-akpali akpali muscle spindles, nnoo na-aghọ a kpọmkwem na pụrụ iche ngwá ọrụ maka nchoputa nke Neuropathic Akwara Pain.
Ihe mgbaru ọsọ nke ọgwụgwọ bụ nyak muscle shortening, nke presses na na wutere akwara. Supersensitive ebe nwere ike adịghị emetụ n'ahụ, na persistent esiri nke shortened uru nwere ike tọhapụrụ. IMS dị irè maka atọhapụ shortened uru n'okpuru contracture, si otú eme n'ibu mgbu si muscle esiri. IMS, na mmetụta, na-emeso ndị kpatara neuropathic ọnọdụ nke na-akpata ihe mgbu. Mgbe competently rụrụ, IMS nwere a dị ịrịba ama ọma ọnụego, dị ka pụtara site amelioration nke mgbaàmà na ihe ịrịba ama, ọbụna n'ihi na-adịghị ala ala azụ mgbu na mgbọrọgwụ ịrịba ama.
IMS bụ yiri na ụzọ ụfọdụ ka igba okpukpu; Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe ndị dị mkpa iche. IMS achọ a ọgwụ nnyocha na nchoputa site a-eme ihere na Mmebe, agịga insertions na-egosipụta site ahụ ihe ịrịba ama na ọ bụghị dị ka predefined, na-abụghị ọkà mmụta sayensị meridians, mgbe nke onye na ebumnobi mmetụta na-na-nwetara ozugbo.
Keywords: intramuscular mmalite, intramuscular, IMs, cgims, gunn IMs, akọrọ needling, igba okpukpu, akpalite na mgbe, myofascial mgbu
The Institute maka Study na Ọgwụgwọ nke Pain (iSTOP)
NWETA CGIMS eme - International Directory